Mhando dzenyaya: mangani marongedzero aripo uye ndeapi iwo | Zvazvino Zvinyorwa
Kufunga mune nyaya zvinowanzo kuve zvine hukama nevateereri vevana. Zvisinei, izvi hazvifanirwe kunge zviri izvo sezvo paine akawanda mhando dzenyaya. Mamwe acho anotarisana nevateereri vakuru, nepo mamwe, aine madingindira evana, angave evana.
Asi ndedzipi nyaya dzenyaya dziripo? Chii chimwe nechimwe chazvo? Kana kuda kuziva kwako kwakakubaya, saka tichataura nezvazvo.
1 Chii nyaya
2 Ndedzipi mhando dzenyaya dziripo?
2.2 Ngano dzemhuka
2.3 Ngano dzetsika
2.12 YeSainzi ngano
3 Chii chinoita kuti nyaya iwire mune chimwe chikamu kana chimwe
Nyaya inotsanangurwa senhau ipfupi, inogona kana kusasangana nezviitiko chaizvo, uye vane mavara anoderedzwa. Nhaurwa yenyaya idzi yakapusa uye inogona kutaurwa nemuromo kana nenzira yakanyorwa. Mariri, zvikamu zvengano zvinosanganiswa nezviitiko chaizvo, uye zvinoshandiswa kutaura nyaya asiwo kubatsira vana kudzidza hunhu, hunhu, nezvimwe.
La Chimiro chenyaya chakakonzerwa nezvikamu zvitatu zvakanyatsotsanangurwa mune dzese:
Sumo, apo vatambi vanoziviswa uye nekuunzwa kuchinetso chavanacho.
Pfundo, apo mavara akanyudzwa mudambudziko nekuti chimwe chinhu chaitika chinotadzisa zvese kubva pakuve tsvarakadenga sedzesumo.
Mhedzisiro, inoitika kana mhinduro ikawanikwa kune iro dambudziko kuti uve nemagumo anofadza zvakare, anogona kuita sepakutanga.
Ndedzipi mhando dzenyaya dziripo?
Hatigone kukuudza kuti kune kurongeka kumwe chete kwemhando dzenyaya dziripo, sezvo paine vanyori vanozviisa muzviverengero zvikuru kupfuura vamwe. Semuenzaniso, maererano nehurukuro "Kubva mungano inozivikanwa kusvika kune yekunyora ngano" naJosé María Merino, kune mhando mbiri dzenyaya:
Dzakakurumbira ngano. Iyo rondedzero yechinyakare panoratidzwa nyaya yevamwe vatambi. Izvi, zvakare, zvakakamurwa kuita ngano, mhuka, ngano uye ngano dzetsika. Uye zvakare, zvakabatanidzwa kune ese iwo angave ngano uye ngano, kunyangwe zvaisazoverengerwa mukati mekukamurwa kwenyaya inozivikanwa.
Zvinyorwa zvinyorwa: ndiro iro basa rinoendeswa kuburikidza nekunyora. Imwe yekare yakachengetedzwa ndiEl conde Lucanor, runyorwa rwemakumi mashanu nenomwe nyaya kubva kwakasiyana kwakanyorwa, yakanyorwa naDon Juan Manuel. Icho chiri mukati meichi chikamu chikuru apo patinogona kuwana kupatsanurana kukuru, sezvo zviri zvechokwadi nyaya, zvakavanzika, nhoroondo, kudanana, mapurisa, fungidziro ...
Vamwe vanyori havaoni uku kupatsanurwa uye funga kuti zvidimbu ndizvo chaizvo mhando dzenyaya izvo zviripo. Nekudaro, inonyanya kuzivikanwa ichave iri:
Izvo zvaizotsanangurwa mukati meiyo ngano dzakakurumbira, imwe yeinonyanya kuverengerwa uye inozivikanwa nekuva nyaya isiri yechokwadi, inoitika munguva isingazivikanwe nenzvimbo uye ine bvunzo inofanirwa kukundwa kusvika kumagumo anofadza.
Mavari protagonists havazi vanhu, asi mhuka dzine hunhu hwevanhu. Dzimwe nguva mhuka dzinogona kuperekedzwa nevanhu, asi idzi dzinogona kuita kumashure.
Idzo ndidzo nyaya kwaunotsvaga kutsoropodza nzanga kana iyo nguva inotaurwa nyaya yacho, dzimwe nguva kuburikidza nekunyomba kana kuseka.
Ivo vaizosanganisirwa mukati mezvinyorwa zvinyorwa, asi vazhinji vanofunga kuti vanogona zvakare kuve dzinozivikanwa nyaya. Mune ino kesi, iyo nyaya yakavakirwa pane chimwe chinhu chakagadzirwa uko mashiripiti, uroyi uye vatambi vane masimba anoonekwa.
Ndeavo vanotaura zviitiko zuva nezuva, nazvo vana vanogona kuzvizivisa uye, nenzira iyi, vanodzidza.
Ivo vanozivikanwa nekutsvaga kuti muverengi akasungirirwa kunyaya nenzira yekuti anorarama zvakada kufanana neanopokana nenyaya yacho.
Kusiyana neiyo yapfuura, panotsvakwa hunyengeri, pano kutya ndiko kucharatidza rangano yacho. Asi zvakare zvinotarisirwa kuti muverengi anowana zvakafanana neuyo protagonist, anotya uye anorarama kutyisa kunotaurwa murungano.
Chinangwa chako ndechekupa a nyaya inonakidza inoita kuti muverengi aseke, kunyangwe kuburikidza nemajee, anosetsa mamiriro, asina kujeka mavara, nezvimwe.
Izvo hazvisi zvakanyanya kutsanangura nhoroondo yezvakaitika, asi pachinzvimbo ivo vanoshandisa icho chaicho chokwadi kuti vawane mavara uye nguva nenzvimbo, asi ivo havafanirwe kuve vakatendeka kuchokwadi.
Semuenzaniso, inogona kuve nyaya pamusoro paLeonardo Da Vinci rimwe zuva paakambozorora kupenda. Zvinozivikanwa kuti hunhu hwaivepo uye nyaya iri mune iyo nzvimbo-nguva, asi haifanire kunge iri chinhu chakanyatsoitika.
Hwaro hwenyaya idzi inyaya umo dingindira riri rudo pakati pevatambi vaviri.
Mavari zano inoenderana nemhosva, mhosva kana kujekesa dambudziko kuburikidza nevanyori vari mapurisa kana matikitivha.
Ndeavo aripo mune ramangwana kana mune aripo asi nehunyanzvi hwemberi hwekufambira mberi (izvo zvisati zvavapo muhupenyu chaihwo).
Chii chinoita kuti nyaya iwire mune chimwe chikamu kana chimwe
Fungidzira kuti urikuenda kunotaura nyaya kumwanakomana kana mwanasikana wako, kumuzukuru wako kana muzukuru… Panzvimbo pekutora bhuku uchivaverengera, unotanga kutaura nyaya yacho nekuigadzira. Kana kurondedzera imwe yaunotoziva kare. Zvichienderana nechakarongwa pamusoro, ichi chingave chiri chevanhu ngano kana ichiita nekumwe kupatsanurwa kwenyaya dzevanhu.
Kune rimwe divi, kana izvo zvaunoita zvikaverengwa bhuku renhau, zvinowira mukati mezvinyorwa zvinyorwa, nekuti zvichazotepfenyurwa kuburikidza nekunyora.
Chaizvoizvo Pakusarudza nyaya, inogona kuitwa nenzira dzakawanda:
Kunyangwe zvichitaurwa kana kuverenga (zvakanyorwa).
Kunyangwe iri yakanaka, fairies, ngano, mapurisa, vaviri ...
Kunyange vamwe nyaya dzinogona kuiswa mumapoka maviri kana anopfuura sezvo panguva yekuzvinyora, zvinogona kuitwa zvinoenderana nevanyori kana maererano nechirongwa. Semuenzaniso, fungidzira kuti vatambi imhuka dzine hunhu hwevanhu (vanotaura, kufunga, nezvimwewo). Tingave takatarisana nenyaya yemhuka. Asi zvakadiniko kana ivo vatambi vaive vatikitivha vachiongorora kuba mune kwesango? Tave kutopinda mupolice tale yevana.
Usape kukosha kwakanyanya pakuda kupatsanura bhuku. Vaparidzi chete ndivo vanozvipatsanura uye vanozviita kuchengetedza "odha" mumabhuku avo emabhuku, uyezve kuziva kuti ndeapi mabhuku avanofanira kushambadza uye neasinga fanirwe. Asi kana zvasvika pakufunga nezvevaverengi, ivo vanoverenga nyaya dzacho zvichibva pane zvavanofarira, vachikwanisa kusanganisa marudzi uye, nekudaro, vova vepakutanga kuvashamisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mhando dzenyaya
Leopoldo Panero. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Dzimwe nhetembo